Zawgyi Font and Myanmar Keyboard for iPhone and iPad | U.N.O.B
(1) Open “SAFARI BROWSER” on your iPhone or iPad
(2) Click Here to download Zawgyi Font
(3) Install Zawgyi Profile
Download Myanmar TT Keyboard
(1) Click Here to download TT Keyboard
iPhone နှင့် iPad စက်များအတွက် စာလုံး (font) နှင့် ကီးဘုတ် နှစ်မျိုးလုံး ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ရပါမည်။
(၁) မြန်မာစာလုံးများ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် Zawgyi Font ကို ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ရပါမည်။ iPhone ထဲမှ Safari browser ကို အသုံးပြုပါ။ ပေးထားသော Link ကို နှိပ်၍ Profile ကို install လုပ်ပါ။
(၂) စာရိုက်နှိပ်ရန် အတွက် TT Keyboard ကို APP STORE မှ တစ်ဆင့် ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
NOTE: ဇော်ဂျီစာလုံးနှင့် TT Keyboard ကို UNOBUSA မှ ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည် ဝေမျှထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်ထားသူများအား လေးစားသလို ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ရှိပါသည်။
zinminaung September 4, 2019 at 12:31 am Reply
Toe Oung June 22, 2018 at 9:58 pm Reply
installed as per instructions on my lPad.All ok except subject in emails in Myanmar Zawgyi font do not display correctly. Any help will be highly appreciated. it works perfect on iPhone and Mcbook air. Thanks in advance.
Kathy Kyaw February 22, 2018 at 3:17 am Reply
I can’t download Zaw Gyi font .
Aung February 1, 2018 at 11:38 am Reply